Barasaaab isagoon xilka ka tagin isaga huleelay magaaladii laga soo doortay - BBC News Somali
Barasaaab isagoon xilka ka tagin isaga huleelay magaaladii laga soo doortay
Lahaanshaha sawirka MIKE SONKO/FACEBOOK
Image caption Barasaabka Nairobi Mike Sonko
Barasaabka magaalada Nairobi Mike Sonko ayaa la sheegay inuu ka cararay magaaladii uu ka arriminayay ee Nairobi taaso dadweynaha ay siyaaba kala duwan uga hadleen.
Barasaabka Nairobi ayaa sheegay in ammaankiisa uu u baqay sidaas darteedna ay arrintaasi walaac ku reebtay badqabkiisa.
Dowladda Kenya ayaa kala noqotay qaar kamid ah ilaaladii warddinaysay barasaabka Nairobi.
Balse Mike Sonko ayaa beeniyay in howlahiisa shaqo ee maamulka Nairobi uu kasoo agaasimaya gurigiisa oo ku yaalla xaafadda Mua Hills ee magaalada Machakos.
Arrintani ayaa imaanaysa xilli dhawaan ay soo ifabaxeen sawirro muujinaya barasaabka Nairobi u kullan kula qaadanaya golahiisa wasiirada gurigiisa ku yaalla Machakos.
Barasaabka Nairobi waxaa ilaalo u ahaa illa 15 askari balse waxaa lagu soo reebay shan ciidan oo kaliya ah, wuxuuna sheegay inaysan wax ka qaban karin sugidda ammaankiisa.
Bayaan uu soo saaray ku-xigeenka waaxda isgaarsiinta ee maamulka Nairobi ayaa lagu sheegay in Sonko uu xaq u leeyahay in kullan ku qabto meel kasta oo uu guri ku leeyahay , Wuxuuna ku baaqay in laiska fogeeyo wararka laisla dhex maraya ee sheegaya in barasaabka uu dhuumaalaysi ku jiro.
Mike Sonko ayaa ilaa toddobaakii lasoo dhaafay ku sugnaa deegaanka Athi River kaddib markii uu mar sii horreysay uu Miguna Miguna usoo magacaabay ku-xigeenka Barasaabka Nairobi si uu baddalo ninkii horraan iska casilay jagadaasi.
Barasaabka Nairobi ayaa sheegay in naftiisa ay khatar ku jirto oo uu sheegay in saraakal ka tirsan dowladda uu qorshaynaya inuu dilo isaga kaddib markii la dhimay tiradii ciidaanka ee waarddiyaha u ahaa.
Dawarsiga oo laga mamnuucay bartamaha Nairobi
Wuxuu sheegay in shakhsiyaadka ka tirsan golahiisa wasiirada iyo laamaha ammaanka ay isaga bartilmaameedsanayaan.
Mike Sonko ayaa sido kale sheegay in booliska ilaalada u ahaa ee laga la noqday uusan markale doonaynin inay ammaankiisa sugaan.
Wasiirka arrimaha gudaha Kenya Fred Matiangi ayaa dhawaan sheegay in dowladda ay waddo qorshe ay ugu yeerayso ilaa 5000 oo ciidan oo wardiye u ahaa saraakiisha dowladda.
Wasaaradda arrimaha gudaha Kenya ayaa la sheegay inay dhaqan gelinayso qorsheyaal wax ku ool ah oo cusub oo lagu yaraynaya tirada ciidamada ilaalada u ah saraakiisha dowladda sii loo hello saraakiil boolis oo badan oo ka shaqeeya ammaanka shacabka.